Mkpa ọ dị ịgbakwunye ọdịnaya multimedia | ECommerce ozi ọma
Mkpa ọ dị ịgbakwunye ọdịnaya multimedia
Ugboro ole ka anyị hụtụrụla otu ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ihe awade nkọwa ngwaahịa na-atọ ụtọ mana ọ kọrọ zuru ezu ọdịnaya ọtụtụ nke otu? Iji kwuo otu ihe atụ, ka anyị were ya na anyị chọrọ zụta laptọọpụ, ma naanị foto nke ngwaahịa a bụ nke kọmputa mechiri ma hụ site n'elu.
Anyị nwere ike ịhọrọ ịzụrụ na ibe ọzọ nke na - eme ka obi sie anyị ike mgbe gụnyere foto site n'akụkụ dị iche iche ma ọ bụ vidiyo arụ ọrụ nke kọmputa, n'ihi ya mkpa nke ọtụtụ ọdịnaya
N'ihi nke a, anyị ga-agụnye ọtụtụ nke faịlụ mgbasa ozi nke mere na ndị ahịa anyị nwere ike mara njirimara niile nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị ma kpebie ịzụta ha.
1 Na-akwado ọdịnaya dị iche iche nke ọtụtụ mgbasa ozi anyị nwere ike ịgụnye na katalọgụ anyị
1.1 • 360 Celsius echiche:
1.2 • Vidio:
1.3 • Nkuzi:
Na-akwado ọdịnaya dị iche iche nke ọtụtụ mgbasa ozi anyị nwere ike ịgụnye na katalọgụ anyị
• 360 Celsius echiche:
Gụnye foto site n'akụkụ niile nke ngwaahịa gị, yana echiche niile enwere ike. Ime, mkpuchi na ngwa kwesịrị ka ese foto. Enwere ngwa ndị na-enye gị ohere ịgụnye mmekọrịta mmekọrịta nke ngwaahịa gị na ibe gị, nke mere na iji otu foto nke ngwaahịa gị ọ nwere ike gbanwee ya site na onye ọrụ iji hụ ya n'akụkụ niile.
Gụnye ma ọ dịkarịa ala otu vidiyo mgbasa ozi nke ndị mmadụ na-eji ngwaahịa gị ma na-ekpori ndụ ya. Gbaa mbọ hụ na ogo dị mma ma nwekwaa nghọta. Vidio ahụ ekwesịghị ịdị ogologo, n'ụzọ megidere, nke ga-adị mkpụmkpụ ma kwuo kpọmkwem na ọ ga-abụ nnabata ka mma.
Ha nwere ike ịdị n'ụdị vidiyo ma ọ bụ dịka ntuziaka, mana a na-atụ aro ya ma ọ bụrụ na ngwaahịa gị chọrọ ụfọdụ nzukọ, maọbụ ọ bụrụ na ọ bụ ihe nrụpụta nke kwesịrị iji usoro ụfọdụ ejiri rụọ ọrụ, ị gụnyere nkuzi maka arụmọrụ ya. Ọ bụghị naanị na ha na-akpali mmasị ịmata ihe na mmasị nke onye ahịa gị, mana ha ga-ahụkwa uru na ịdị irè nke ngwaahịa gị.
Ọ na-atụ aro ka ị tinye a ngalaba echiche. Ọ bụrụ na ngwaahịa gị dị mma na ndị ahịa gị nwere obi ụtọ na ha ga-achọ ka ndị ọzọ mara. Enweghị ihe ọ bụla na-agba ume inwe obi ike na ngwaahịa karịa nkwanye onye ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Mkpa ọ dị ịgbakwunye ọdịnaya multimedia
Nyocha onwe gị, mee ka nchekwa gị dịkwuo elu
Mgbasa ozi forntanetị maka SMEs